थाहा खबर: आखिर कसरी घटे पशुपति आर्यघाटमा शव?
अस्पतालहरु प्रयोगशाला मात्र नबनुन्
पशुपतिनाथ क्षेत्रमा काम गर्छु म। आजकल भक्तजनसँग खासै अन्तरक्रिया हुँदैन। भक्तजनको संख्या गन्‍न छाडेर आजकल शव गन्‍न थालेको छु। आज दिउँसो कार्यक्षेत्रमै हिँडिरहेका थियौँ। मेरा सहकर्मी कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले भन्‍नुभयो, ' सचिवज्यू, यो बेलामा घाटमा शव निकै नै कम आइरहेका छन्, यसको कारण के होला? हो त है! हामी मनन् गर्न थाल्यौँ। ‘बढी शव आउने ठाउँ अस्पतालहरु बन्द नै छन्’, ‘अस्पतालमै धेरैको ज्यान जाने रहेछ कि क्या हो?’ हामीले ठट्टा गर्यौँ।
मेरो मनमा यही कुरा खेल्न थाल्यो। कोरोना कहरका कारण चारैतिर बन्द छ। मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। सवारीसाधन निकै कम छन्। मैले ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी मेरा बन्धु भीमप्रसाद ढकाललाई फोन गरेँ। उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार औसतमा देशभरमा दैनिक ७ जना र काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १ जना व्यक्तिको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुँदो रहेछ।
अस्पतालहरुले सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोकोसमेत उपचार गर्न नमानेका समाचार आइरहेका छन्। सहज अवस्था हुँदा एकठाउँमा गर्नुपर्ने अपरेशन अर्को ठाउँमा गरेर बिरामी मार्ने अनि जबजब समस्या पर्छ, तबतब भाग्‍ने अस्पताल किन चाहियो ? यो प्रश्‍नले पनि मेरो मन खल्बलाइरहेको छ।
पशुपति क्षेत्रका आर्यघाट, भष्मेश्वर घाट र विद्युतीय शवदाहगृहमा गरी दैनिक २५ देखि ३५ शव दहन हुन्छन्। तर अहिले दैनिक औसतमा १० देखि १५ वटा शवदहन गर्न ल्याइन्छन्। बाँकी संख्या खोई त? ल दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने १ जना घटे।
टाढाटाढाबाट ल्याउने पनि ल २ जना नै मानौँ। अरु खोई त? मैले उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा साथीहरुलाई बुझ्‍न पठाएँ, तर त्यता पनि त्यस्तो कुनै अस्वाभाविक चाप देखिएन, बरु कम नै देखियो।
कतै अस्पतालहरु बन्द भएकै कारण शवको संख्यामा कमी भएको त होइन? यो प्रश्‍न मेरो मथिङ्गलमा नाचिरहेको छ। अहिले कतिपय निजी अस्पताल बन्दजस्तै छन्। मानिसहरु घरघरमै छन्।
कतै हाम्रा अस्पतालहरु उपचारका नाममा प्रयोगस्थल त बनिरहेका छैनन्? अल्पविकसित मुलुकहरुमा परीक्षण र प्रयोग गर्नका लागि औषधी पठाइन्छन् भन्‍ने पनि कतै कतै पढेकै हो। कतै हामी पनि त्यही प्रयोगका पात्र बनिरहेका त छैनौँ? यी प्रश्‍नले त झन छट्पटी गराएको छ।
हामीले हाम्रो पूर्वीय दर्शनले वकालत गरेका प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिहरु त कम नै प्रयोग गर्छौँ। अब त्यसलाई पुनः जगाउने हो कि ? विश्‍वका शक्तिशाली देशहरु नै औषधि उद्योगको प्रभावमा परिरहेको अवस्थामा अहिलेको कोरोना कहरबाट पाठ सिकेर हाम्रै पूर्वीय जीवनपद्धतिलाई जागृत गर्दै अगाडि बढ्ने हो कि?
अस्पतालभन्दा बढी विद्यालय नै खोल्ने हो कि? अस्पताल पूर्णरुपमा सरकारले नै चलाउने हो कि? चिकित्सा शिक्षा लगायत अन्य शिक्षा क्षेत्र पनि पूर्णरुपले सरकारले नै चलाउने हो कि! हाम्रो पूर्वीय दर्शन र पद्धति सिकाएर मानिसलाई प्राकृतिक रुपमै स्वस्थ राख्‍ने हो भने अस्पतालको आवश्यकता कम पर्दथ्यो कि?
प्रश्‍नैप्रश्‍नबीचमा रुमलिइरहेको छु। उत्तर मसँग छैन।
लेखक, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव हुन्।